Layaabka Madaxda Dunida Xukunta ,Trump oo Aay Afadiisa Kowaad Is qabteen Uguna Goodiyay in uu Mustaafurin Doono | Biyoguurenews.com
Home Wararka Layaabka Madaxda Dunida Xukunta ,Trump oo Aay Afadiisa Kowaad Is qabteen Uguna...
Layaabka Madaxda Dunida Xukunta ,Trump oo Aay Afadiisa Kowaad Is qabteen Uguna Goodiyay in uu Mustaafurin Doono
Haweenay hore lataliye iyo gacanyare ugu ahaan jirtay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegtay in marwada koowaad ee dalkaasi ay muddaba odaygeeda ka sugaysay in uu furo. Laakiin uu isagu ka dhego adaygayo. Isaga oo weliba ugu hanjabaya in haddii inta uu xilka hayo ay ku qasabto in uu furo, uu kaga aargoosan doono in uu ka mustaafuriyo dalka Maraykanka.
Sheekadan yaabka leh ayaa ay haweenaydan oo magaceedu yahay Omarosa Manigault Newman, ku sheegtay buug ay dhowaan soo saartay oo ay u bixisay ‘Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House’ (Maangaab: Qisada qof xogogaal u ah Guriga Cad ee Trump). Waxa ay sheegtay in haddii marwo Melanie ay ku adkaysato in ay si kama damabys ah uga tagto Trump inta uu xilka hayo, ay taasi isaga ku noqon doonto fadeexad iyo quudhsi, sidaa awgeed ay hubaal tahay in uu si uun u ciqaabi doono si uu uga aargoosto.
Omarosa Manigault Newman waxa ay buuggeeda ku sheegtay in Trump uu bilowgii Marwo Melanie ka caawiyey in ay ka soo haajirto dalkeedii Slovenia sannadkii 1996 kii, si ay qayb uga noqoto dharxyeysiinta shirkadda Trump. Sannadkii 2005 ayaa uu Trump guursaday marwo Melanie, hal sano kaddib oo ahayd 2006 diina waxa ay heshay jinsiyadda dalka Maraykanka.
Omarosa oo sii xoojinaysa warkeeda ah in Melanie aanay doonayn saynimada madaxweyne Trump ayaa buuggeeda the ‘Unhinged’ kaga sheekaysay habdhaqannada lammaanahan ee muujinaya in aanay niyadwanaag qoysnimo dhex oollin, gaar ahaan falalka laga arkay marwo Melanie intuu uu odaygeedu xilka hayey, oo ay ka mid tahay in ay marar kala duwan iyada oo dadka oo dhami u jeedaan si cad uga diidday in ay gacanta qabsato, ama iska dhufatay gacanta oo uu qabsaday.
Warbixin ay baahiyeen Aljazeera iyo Daily Mail ayaa lagu sheegay in xoghayaha warbaahinta ee Guriga Cad, gabadha lagu magacaabo Sarah Sanders, ay si adag u deedifaysay warkan ay Omarosa ku qortay buuggeeda, iyada oo ku sheegtay buug ay ka buuxaan beeno iyo eedaymo waxba kama jiraan ahi. Omarosa Manigault Newman waxaa shaqada Aqalka Cad laga eryey bishii laba iyo tobnaad ee sannadkan, kaddib markii lagu eedeeyey in aanay lahayn daacadnimadii iyo niyadsamaantii shaqadu u baahnayd.
Hore ayaa muran loo geliyey sida ay marwo Melanie oo dhar xayeysiiso ahayd ku heshay dal ku galka ay ku timid Maraykanka oo ah nooca loo yaqaanno ‘Einstein Visa’ kaas oo loogu talagay dadka loo arko in uu dalka Maraykanku u baahan yahay, sida dadka aqoonta sare u leh sayniska, dadka leh xirfadaha dhifta ku ah Maraykanka, cilmibaadhayaasha sare iwm. Laakiin qareennada laanta socdaalka ee Maraykanka ayaa ku dooday in aanay sharci darro ahayn in gabadh dhar xayeysiiso ah la siiyo dal-ku-galkan.
Madaxweyne Trump ayaa bilihii u dambeeyey qaaday siyaasado cusub oo muwaadinnimada Maraykanka lagala noqonayo dadka la ogaado in ay been sheegeen markii ay sharciga qaadanayey ama xeelad iyo khiyaamo ay ku heleen jinsiyadda.
Omarosa Manigault Newman waxa ay buuggeeda ku sheegtay in ay suurtagal tahay in sababta ugu weyn ee Madaxweyne Trump siyaasadaha cusub ee socdaalka u riixayo una xiisaynayaa ay tahay in uu afadiisa ugu hanjabo in haddii ay isaga oo madaxweyne ah qasab iskaga furto, uu isaguna siyaasaddan ku dhiqi doono si dalka looga saaro.
Ugu dambayntii, Omarosa waxa ay madaxweyne Trump ku tilmaamaysaa nin aargoosi jecel. Sidaas awgeed ay wax kasta ka filan karto, haddii ay marwadiisu ka dhaqaaqdo. Waxa kale oo ay caddaysay in marwo Trump ay tirsato daqiiqad kasta oo muddo xileedkiisa ka mid ah, si marka uu ka dhammaado ay dhaqso isaga furto.
Previous articleDaawo, Siyaasiga Ismaaciil Buubaa oo Markii Kowaad ka hadlay Arimo Siyaaasadeed oo Khuseeya Ciidamada qaranka Somaliland iyo Dhismahooda
Next articleMadaxweynaha Maraykanka oo hoos u dhigay calanka Aqalka Cad